ပိနျခငျြလှနျးလို့ သံပုယိုသီးရစေိမျသောကျသူတှေ သတိထား.. – Daily Feed MM
ခုခတျေစားနတေဲ့ ကိုယျခန်ဓာထဲက အဆိပျအတောကျတှဖေယျရှားပေးတဲ့အပွငျ ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ ခရြာမှာလညျး အသုံးဝငျလှတဲ့သံပုယိုသီးစိမျထားတဲ့ရေ (Lemon water) ကို det၀x အကွောငျး စိတျဝငျစားသူတိုငျး ကွားဖူးကွပါလိမျ့မယျ။ ၎င်းငျးအရညျကို ပုံမှနျအား
ဖွငျ့ မနကျဘာမြှ မစားမသောကျမီ ဦးစှာသောကျသုံးလရှေိ့ကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ဘယျအရာမှအလှနျအကြှံဆိုတာမကောငျးပါဘူး။ lemon water ဟာ ကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူပွုတယျဆိုပမေယျ့လညျး အမြားကွီးသောကျပါက အောကျပါပွဿနာအခြို့ကို ကွုံတှရေ့နိုငျပါတယျ။
သံပုယိုသီးစိမျထားတဲ့ရဟော ရငျပူခွငျးခံစားနရေပါက ပိုမိုဆိုးရှားစနေိုငျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ အဲလိုဖွဈရလဲဆိုတာ သံပုယိုရညျမှာပါတဲ့ အယျလျကာလီသကျရောကျမှုကွောငျ့ အကျစဈတှပွေနျဆနျ တကျလာရခွငျးဖွဈပါတယျ။
အကျစဈပါဝငျတဲ့အစားအသောကျတှကေို အမြားကွီးစားခွငျးကွောငျ့ သှားတှပေကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။ lemon water ကို သောကျရငျးတဖွညျးဖွညျးနဲ့ သှားရဲ့ကွှလှောတှပေကျြစီးလာပွီး ပူတဲ့အစားအစာတှနေဲ့ အေးတဲ့အစားအစာတှစေားရငျ မခံနိုငျဖွဈလာပါတယျ။ ဒါတှေ
ကာကှယျနိုငျဖို့ Lemon water သောကျရငျ ပိုကျနဲ့စုပျသောကျသငျ့ပါတယျ။ အကယျ၍ သှားတှပေကျြစီးနပွေီဆိုပါက သှားဆရာဝနျထံသှား၍ ကုသမှုခံယူသငျ့ပါတယျ။
3. ဆီးသှားမြားခွငျးနဲ့ ရဓောတျခနျးခွောကျခွငျး
သံပုယိုသီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမငျ C ဓာတျဟာ သဘာဝဆီးဆေးတဈမျြိုးပဲဖွဈပါတယျ။ ဆိုလိုတာက ဆီးသှားမြားစခွေငျးကွောငျ့ ဆားဓာတျနဲ့ရဓောတျတှကေို ဆုံးရှုံးစနေိုငျပါတယျ။ Lemon Water သောကျခွငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျကိုအကြိုးပွုနိုငျတယျဆိုပမေယျ့လညျး ရဓောတျ
ခနျးခွောကျခွငျး စတငျခံစားနရေပွီဆိုပါ က လြှော့ပွီးသောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။ သံပုယိုသီးစိမျထားတဲ့ detox water ရဟော သဘဝပစ်စညျးတှနေဲ့ပွုလုပျထားတာကွောငျ့ အန်တရာယျမရှိဘူးဆိုပမေယျ့လညျး အခွားကနျြးမာရေးပွဿနာတှရှေိပါက မသောကျသုံးမီ ဆရာဝနျနှငျ့
Crd Dr. Thinzar
ခုခေတ်စားနေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲက အဆိပ်အတောက်တွေဖယ်ရှားပေးတဲ့အပြင် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ ချရာမှာလည်း အသုံးဝင်လှတဲ့သံပုယိုသီးစိမ်ထားတဲ့ရေ (Lemon water) ကို det၀x အကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းအရည်ကို ပုံမှန်အား
ဖြင့် မနက်ဘာမျှ မစားမသောက်မီ ဦးစွာသောက်သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်အရာမှအလွန်အကျွံဆိုတာမကောင်းပါဘူး။ lemon water ဟာ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အများကြီးသောက်ပါက အောက်ပါပြဿနာအချို့ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
သံပုယိုသီးစိမ်ထားတဲ့ရေဟာ ရင်ပူခြင်းခံစားနေရပါက ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အဲလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာ သံပုယိုရည်မှာပါတဲ့ အယ်လ်ကာလီသက်ရောက်မှုကြောင့် အက်စစ်တွေပြန်ဆန် တက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အက်စစ်ပါဝင်တဲ့အစားအသောက်တွေကို အများကြီးစားခြင်းကြောင့် သွားတွေပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ lemon water ကို သောက်ရင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ သွားရဲ့ကြွေလွှာတွေပျက်စီးလာပြီး ပူတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ အေးတဲ့အစားအစာတွေစားရင် မခံနိုင်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါတွေ
ကာကွယ်နိုင်ဖို့ Lemon water သောက်ရင် ပိုက်နဲ့စုပ်သောက်သင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ သွားတွေပျက်စီးနေပြီဆိုပါက သွားဆရာဝန်ထံသွား၍ ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
3. ဆီးသွားများခြင်းနဲ့ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း
သံပုယိုသီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမင် C ဓာတ်ဟာ သဘာဝဆီးဆေးတစ်မျိ်ုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဆီးသွားများစေခြင်းကြောင့် ဆားဓာတ်နဲ့ရေဓာတ်တွေကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။ Lemon Water သောက်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ရေဓာတ်
ခန်းခြောက်ခြင်း စတင်ခံစားနေရပြီဆိုပါ က လျှော့ပြီးသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ သံပုယိုသီးစိမ်ထားတဲ့ detox water ရေဟာ သဘဝပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုပေမယ့်လည်း အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရှိပါက မသောက်သုံးမီ ဆရာဝန်နှင့်